Ingabe ukulala amahora ayisishiyagalombili kwanele kumsubathi? - Izimpendulo Ezihamba Phambili
Main > Izimpendulo Ezihamba Phambili > Ngabe abasubathi badinga izixazululo ezengeziwe zokulala
Ngabe abasubathi badinga izixazululo ezengeziwe zokulala
Ingabe ukulala amahora ayisishiyagalombili kwanele kumsubathi?
Malinilalayenzaabasubathiisidingo? I-Proabasubathiimvamisa zidinga okungaphezulu kokunconyelwe iningi ukuthi zikuthole8-10amahoranjalo ebusuku. Kepha kumuntu omdala ovamile, khomba abayisikhombisa kuya kwabayisishiyagalolunyeamahora okulalaubusuku ukugwema imiphumela yesifo esingelaphekilalaukuncishwa.07.17.2018
kupholile Ngabe uke ucabange ukuthi bekungaba kuhle kanjani ukube usuku belunamahora amaningi? Ungahle ube nesikhathi sayo yonke into: umsebenzi, izinto zokuzilibazisa, abangani nomndeni noma ukuvilapha nje ungenzi lutho.
Kepha phupha ngokwanele, masibuyele eqinisweni! Ukuphela kwendlela yokwenza lokhu ngokulala kancane, kepha ngabe lokho kuzosebenza ngaphandle kokukuguqula ube ngumuntu okhathele? Hhayi-ke, i-BRIGHTSIDE ikhulume nendoda okwathi ngelinye ilanga yanquma ukuthi ukulala ingeyabantu ababuthaka futhi yaguqula inqubo yayo yansuku zonke ukuze isalelwe ngamahora amabili kuya kwamane kuphela ukuba ilale, futhi yilokhu eyakusho: Uvelaphi lo mbono? Amahlebezi anokuthi izingqondo ezinhle ezinjengoLeonardo Da Vinci, uNikola Tesla-Salvador Dali kanye nenqwaba yezinye izingcweti zohlobo olufanayo lokuzijwayeza okubizwa ngokuthi ukulala nge-polyphasic, lapho unciphisa kakhulu isikhathi sakho sokulala ebusuku bese ungeza okumbalwa okungamashumi amabili kuya kwamashumi amathathu amaminithi okulala usuku lonke. Kuzwakala kuhlanya kancane, kepha ekugcineni uzophela nezinsuku ezimbalwa ezengeziwe isonto ngalinye, kanye nesigaba esibaluleke kakhulu sokulala esaziwa njengokunyakaza kwamehlo okusheshayo, sihlala imizuzu eyi-20-30, futhi lesi yisikhathi esiphakeme sakho ubuchopho bokuvuselela nokunciphisa ukucindezeleka kwabanye abantu abaningi nginesikhathi cishe cishe njalo ngenyanga ngithatha isinqumo sokuthi ngifuna ukuya echibini njalo kepha kunalokho ngiya ekhaya ngilale ngibuke omunye umncintiswano we-YouTube ngivame ukufika sekwephuzile emihlanganweni futhi Ngiyanqikaza yonke imisebenzi yami ebalulekile kuze kube usuku olulandelayo, ngakho-ke kwesinye isikhathi nginqume ukuthi kwanele futhi sekuyisikhathi sokuzama ukulala nge-polyphasic. Ngaphambi kokuba siqhubeke, kufanele wazi ukuthi ukulala nge-polyphasic kunamashejuli amaningi ongakhetha kuwo uma ufuna ukukuzama, ungakhetha kumamodeli ajwayelekile amahlanu noma lawo aqhutshwa ngabaphambili emlandweni, njengoWinston Churchill, owenze eziyisithupha kanye nohhafu wamahora ngoSuku elele, noma uNikola Tesla okhethe ukusnuza amahora amabili nemizuzu engama-20 uG.
Ungenza futhi engikwenzile futhi uzenzele uhlelo lwakho. Kukhona futhi ama-calculator amashejuli amaningi aku-inthanethi angakusiza ngalokhu. Ngakho-ke uhlelo lwami lokugcina lokulala lwalunamahora amane okulala ebusuku namakhefu amabili okulala imizuzu engu-25 emini.
Enye emva kwesidlo sasemini kanti enye ngemuva kokushintshwa komsebenzi Ngihambe kanjena izinsuku ezilandelayo Usuku lokuqala ukuhlolwa kwaqala kumnandi ukwethembeka ngalala ngo-1: 30 ngavuka ngo-5: 30 nganginesikhathi esiningi ngaphambi komsebenzi Ngakho-ke ekugcineni ngenza Ingabe yonke imisebenzi yasendlini ngayenza yaba uhlu lwezinto okufanele zenziwe isonto lonke. Ukugcina isikhathi, ngilethe isifihla-buso sokulala nezinto zokufaka izindlebe emsebenzini. Ngemuva kwesidlo sasemini, ngivele ngathola indawo ethule yokuphumula futhi ngilale.
Ngizamile into efanayo ekhaya kepha angikwazanga ukulala kungakapheli nemizuzu engama-25. Kulungile. Ngicabanga ukuthi lokhu kuzoshintsha ezinsukwini ezimbalwa ezizayo, usuku lwesibili, ngaphambi kokuqala lesi silingo, ngangikhulumile nabantu abambalwa abazama futhi bakwazi ukuphatha lolu hlobo lokulala, bangixwayisa ukuthi kuzoba khona bese Kuthatha amasonto ukujwayela Kuso emasontweni amabili okuqala uzizwa ufana ne-zombie Futhi yilokho kanye okwenzekile kimi ngosuku lwesibili ngangikhathele ngendlela emangalisayo futhi ngikhandlekile emoyeni Usuku lwe-3 Ngalesi sikhathi kwakungekho namuhla noma kusasa Zonke izinsuku ngibe ukufiphala okukodwa okuhle Kodwa ekugcineni ngikwazile ukulala emizuzwini engaba yimizuzu engama-25, kepha ngemuva kwalokho angizizwanga kangcono njalo bese ngicabanga kimi ukuthi 'kungani ngikwenza lokhu emhlabeni, kufanele ngilale nje '.
Kuthathe amandla amaningi nokuzimisela ukunqoba lesi sigaba esinzima nokuqhubeka nokuhlolwa. Ngosuku lwesine, isimo sokufiphala saba cishe yinto ejwayelekile kimi lapho othile eqala ukukhuluma nami ngangivele ngime lapho ngigqolozele ngingenalutho phambi kwami ​​kungibizele amandla amaningi ukuba nengxoxo. Isikhathi esiningi ngisichithe ngigqolozela emkhathini.
Ukubukeka kwami ​​kushintshile ezinsukwini ezine zokuqala futhi futhi nakanjani angizange ngibe ngcono ngangibukeka ngimuhle kakhulu futhi amehlo ami ayehlala egcwele igazi enemibuthano emnyama ngaphansi kwabo Mhlawumbe okubi kakhulu sekuphelile futhi sekuzobangcono kusuka lapha ngoSuku lwesihlanu engangiqala ngalo ngokwami ​​ekujwayeleni uhlelo lwami olusha lokulala kancane. Lapho nje bevala amehlo ami okomzuzu wemizuzu engama-25, ngingalala ubuthongo obunzima, ngize ngivuke ngaphambi kwesikhathi ebenginaso bese ngizizwa ngiphumule kancane, ngibe nesikhathi esiningi esikhululekile nasebusuku, ngakho Nginqume ukufunda izincwadi eziningi futhi ngabuka amadokhumentari amaningi Le yindlela engathola ngayo mayelana nesizwe saseBrazil esibizwa nge-piryohae, abantu kuleso sizwe abalali ngokuphelele. Bathatha isihlwathi semizuzu engama-20 kuphela ngezikhathi ezithile ngokuncika esihlahleni.
Bakholelwa ukuthi uma ulala isikhathi eside kakhulu, uba ncipha ngokwakho. Futhi, ngokuvamile abakuthandi ukulala, okusiza ngezinsuku eziyisithupha nesikhombisa, ngagcina sengijwayele ngokuphelele ukulala nge-polyphasic cishe njalo lapho ngivuka emathongweni ami, ngangizizwa sengathi ngilale amahora ambalwa esikhundleni imizuzu engama-25 kuphela yamabhulokhi engqondo futhi ifu lanyamalala ngokuphelele futhi amandla ami okusebenza abuyela kokujwayelekile. Ngenze okungaphezu kwalokho engangikucabanga.
ibhayisikili yasentabeni yamahhala
Ngangifunda izincwadi futhi ngibuke ama-movie njalo ebusuku, futhi ngangikwazi ngaphandle kwekhofi! Ukungasho. Ngiqale ukuya echibini lokubhukuda, ngakho-ke ngibuyele emzileni, izinsuku eziyisishiyagalombili kuya kweziyishumi, ubuciko namandla ami athuthuka kakhulu, njengoba ngikwazile ukuvuselela ubuchopho bami ngesikhathi futhi ngibuyise amandla ami ngemuva kokuzumeka usuku lonke beludlulile futhi ngikwazile ukuthola isisombululo esihle kakhulu senkinga. Angikwazanga ukuthola ngokushesha, zonke izimpawu ezisobala zokukhathala sezihambile nebala lami labuyela kulokho elaliyikho ngaphambilini.
Ukuzama kwami ​​kwaqhubeka nokuveza imiphumela emihle. Ngazizwa ngimuhle futhi ngakhiqiza kakhulu kunanini ngaphambili. Izinsuku 11 kuya ku-14 Kuleli qophelo nginqume ukunganamatheli esimisweni esithile sokulala futhi ngivumele umzimba wami unqume ukuthi yisiphi isikhathi esikahle sokuphumula futhi angizizwanga ngikhululekile ngokwazi okuningi ngemingcele yami Ngakho-ke ngalala kancane kancane ubusuku bonke kwavela ukuthi amahora amabili nohhafu okulala ebusuku anele kimi uma ngilala emini.
Uma ngifuna ngisho nokulala okuncane ebusuku, kufanele ngivele ngilale kancane bese kuba yilokho. Yilokho engikwenza manje. Ubuhle nobubi bePolyphasic Sleep Pro's Number One ProductivityNgikwazile ukuthola uhlu lwami lwezinto okufanele zenziwe usuku lonke ngaphambi kokudla kwasemini.
Uma lokho kungeyona inhloso, angazi ukuthi yini. Sekulula kakhulu ukuxazulula zonke izinkinga nokwenza yonke imisebenzi yami. Inombolo yesibili, awasekho amawashi e-alamu.
Sengiqalile ukuqaphela ukuthi ngivuka ngaphambi kokuba i-alamu ikhale, futhi angiyena othukuthele kanjalo. Ngikulungele nje ukugxuma ngenze izinto. Inombolo yokudla okunempilo okuyisithathu.
Kwakunzima ukulala ngesisu esigcwele. Ngesikhathi sokuhlolwa kwami, ngangidla kakhulu ukudla okulula nokudla kwemvelo. Umphumela wawusobala, umuzwa wobunzima esiswini wanyamalala.
Ngasebenza ngokwengeziwe futhi ngonga nemali ethile. Kwakufanele impela, inombolo yesine: ukuzivocavoca umzimba kanye nezincwadi ezinezikhathi ezincane zokulala. Ngibe nesikhathi esithe xaxa sokuzithuthukisa ngokwenyama nangokwengqondo.
Ngafunda zonke izincwadi engangizifuna futhi ngaqala ukuya ejimini echibini lokubhukuda. Konke lokhu kuholele ekutheni ngigule kaningi futhi ngizizwe ngiqina ngokwengeziwe! Izinsuku njengochungechunge lothuli nokuntwela kokusa Kodwa ngokulala nge-polyphasic izinsuku zonke ziba yisikhathi esingenamkhawulo Ukuhlwa nokusa kuyizimpawu nje zokuthi abantu balale noma bavuke futhi bangabe besaba yisigaba sempilo yami ngalesi sikhathi sokuzama kwakungekho bese-ku-Hard noma ukuya emicimbini yasekhaya noma ukuphuma nabangani futhi wangangitholela nokuthi ngiqale ukuphuza. Konakalisa lonke uhlelo.
Ngicabanga ukuthi ukukhiqiza kudinga ukuzidela. Inombolo yesithathu yimpilo hhayi yabo bonke abantu ekuqaleni kwesilingo, izinguquko ezinqala ebuthongweni bakho zinzima kakhulu ezinhlelweni zakho zemizwa nezokujikeleza kwegazi. Ngakho-ke qaphela, yenza ucwaningo lwakho futhi ufunde kabanzi ngalesi sihloko ngaphambi kokuqala Imicabango Yami Uma impilo yakho yangemva kokuhlolwa ifana nohlu olukhulu lwezinto ongakwazi ukuhambisana nazo, ngabe-ke ukulala nge-polyphasic kungenzeka kukulungele .
Amahlaya eceleni, nakanjani sengikhiqize kakhudlwana futhi ngiba nesikhathi esiningi samahhala esivumela ukuthi ngenze noma yini engiyifunayo nokuningi. Ngakolunye uhlangothi, kungaba nzima njengoba umhlaba wonke unombuso ohluke ngokuphelele. Abangani bakho nomndeni wakho bangakuthola kukuxaka uma ubatshela ukuthi awukwazi ukuthandana nabo noma ubacele ukuthi bamise i-movie ukuze uthathe isihlwathi.
Kunoma ikuphi, kuyisinqumo sakho ukwenza umsebenzi wesikole kuqala bese uqala. Uma lolu hlobo lwezinguquko ezinkulu kungezona ezakho. Ungakhathazeki, kusenezinto eziningi ongazenza ukuze uthuthukise umkhiqizo wakho Okokuqala, uma uzama ukwenza okuthile, cisha ifoni yakho, ingahle izwakale iyisilima kancane, kepha ifoni yakho iyisiphazamiso esikhulu, uzophendula umlayezo lapho uphendula lapha, hlola ezinye izindaba lapho futhi kungakapheli mizuzu usuvele ku-InstagramHlola amaphrofayili osaziwayo noma uphikisane ngesihloko esisha ku-Twitter.
ukupenda kanjani kabusha ibhayisikili
Vele uyibeke phansi noma uvule imodi yendiza. Sithembe, umkhiqizo wakho uzokhula nakanjani. Zonke izithiyo nezithiyo zisekhanda empilweni yangempela.
Akunandaba ukuthi uqala okuthile ngoMsombuluko noma ngoLwesine. Okubaluleke kakhulu ukuthi usebenze kangakanani kuyo. Enye into indawo yokusebenza engcolile.
Uma indawo osebenzela kuyo ingahlelekile awusoze wenza lutho ngokushesha, kumane nje kuthathe isikhathi esithe xaxa ukuthola izinto futhi kukucindezele nakakhulu, ngakho-ke hlanza yonke into futhi ufunde ukuyigcina injalo Mangaza ukuthi abantu ozungeze nabo futhi wenze umehluko omkhulu Zama ukuziqhelelanisa nezinganekwane ezingezinhle neze-debbie-downers; ngeke uthole amandla amahle noma ugqozi oluvela kubantu abahlala becindezelekile ngenxa yabo, bazoba nokudangala kunalokho bavele bagxeke yonke imibono yakho bakwenze uzingabaze futhi ekugcineni ufunde ukuthi 'cha' Kuyigama lomlingo wonke umuntu okufanele alazi . Musa ukuzilayisha ngemisebenzi eminingi kakhulu, eminye yayo ongenandaba nayo. Amanani amosha isikhathi sakho futhi asichithe enza izinto ezikuthokozisayo futhi ezijabulisayo.
Ngabe unawo amanye amathiphu akho okuthi ungakhiqiza kanjani kangcono? Sitshele esigabeni sokuphawula ngezansi, ungakhohlwa ukushaya inkinobho efana nale bese wabelana ngale ndatshana nabo bonke abangani bakho, ungahle uthole umuntu ongathanda ukuzama isigqi sokulala se-polyphasic nawe. Bhalisela isiteshi sethu
Balala isikhathi esingakanani abasubathi abangochwepheshe?
Ucwaningo lukhombisa ukuthi umdlalo ngamunyeabasubathi balalengokwesilinganiso amahora angu-6.5 ebusuku ngenkathi imidlalo yeqembu ingena ngamahora ayi-7. Kubikwe nokuthi lowo muntuabasubathibabethambekele ekuthathweni isihlwathi.03.02.2020
Ngakho-ke ngicabanga ukuthi uthisha ngumuntu engijabule kakhulu ngaye ukuthi bazokufundisa ngokulala nokuzindla ngoba abalindelekile ukuthi kube nguKobe Bryant futhi ungasho ukuthi kungani, nguKobe, ngoba ngenkathi ngiqala ukuthola i-methim sakhuluma okuningi ngokulala nokuzindla futhi wangitshela ukuthi ukusebenzise kanjani, walala amahora amathathu noma amane wabe esebona ukuthi ukulala nokuzindla empeleni kuyizithuthukisi zokusebenza futhi angenza noma yini ukwenza okusemandleni akho emdlalweni, futhi kude nalokho isiko lisiholela ekukholweni ukuthi kukhona ukuhweba phakathi kokuzindla ngokulala nokukhiqiza nokusebenza. Ikhophi lifakazela ukuthi uma ungathola eminye imizuzu engama-30, ungafinyelela kulesi sifundo Lala ubusuku bonke, uthathe njengenselelo, zama ukuthola leso sikhala ukuze wehlise ingqondo yakho futhi uthole imizuzu yakho yokulala engama-30 uzobona kwenza umsebenzi omkhulu impela nginqume ukuthi imikhuba yami yokulala ibiyimbi. Ukusho okuncane, ngiqonde ukuthi, bengihlala nginesikhathi esinzima sokulala, uyazi, angikwazi ukuthola ukuthi ngingawucisha kanjani umqondo wami ukuze sivumele isibani sikhanyise.
Enye ukuthi ngaphuma ngadlala umdlalo ngadlala njenge-crap futhi ngacabanga ukuthi kungani ngidlala njenge-crap ngoba ngangilokhu ngizijwayeza ukwenza okufanayo ngibuye ngibuye kodwa ngangingakwazi ukukuthola kahle ngangizizwa ngivila ngazizwa ngicobekile Futhi ngangazi ukuthi kwakungekhona ukuqeqeshwa kwami ​​ngoba ngangiziqeqesha ngokweqile ngakho-ke ngaqala ukubuka ezinye izinto futhi kulapho ukuqonda kwangishaya khona ukuthi ukuba nomkhuhlane awusenayo i-21, mlingani, mhlawumbe iqiniso lokuthi ngangikuyo kufanele ngilale amahora amabili noma amathathu ebusuku mhlawumbe lokho kuhlangene nawe udlala njenge-shit futhi yingale ndlela engiqale ngayo ukuhlola lezi zinto, lelo i-Action two kungaba yimizuzu emihlanu yokuphumula, imizuzu emihlanu ukuba ngeyami bese uhlala nje uthole lelo zwi langaphakathi futhi futhi vele uzilalele futhi kungakuhle kakhulu ekuseni lapho uqala usuku lwakho. Ukulingisa nsuku zonke ngizindla nsuku zonke futhi ngikwenza ekuseni futhi ngikwenza cishe imizuzu eyi-10 kuye kwengu-15 futhi ngicabanga ukuthi kubalulekile ngoba kungiphatha kabi usuku lonke uyazi ukuthi kuyangisiza kancane, kufana nokuthi inehange owaziyo ukuthi uma ngingakwenzi ngizizwa sengathi ngijaha usuku njalo ngokungafani nokuthi ngikwazi ukulawulwa futhi ngilawule usuku, hhayi ukuthi ubiza ithoni, okuzayo, kepha iqiniso lokuthi ngikulungele noma yini engaqhamuka kimi, uyazi, nginokuthula nakho konke okufika endleleni yami, nokulinganisela nokuthi, okuzayo Lapho ngiqala ekuseni ngokuzindla, kumane kungenxa yami vele ulalele umuntu enginguye ngaphakathi, lokho kufana nokuhlala ngithule futhi ngivumele le micabango ukuthi ivele, bese uthola ithuba lokuzibheka uqobo nezinto ezingaphansi kobuso obungenaso isikhathi sokuhlala wedwa, awusoze wanaka ngoba lapho abantu abasha becabanga ukuthi iqiniso linjani kukhona m noma yiziphi izinto ezenzeka ngakithi, sihlala njalo, sithatha ama-selfies, silokhu sithatha izithombe esizithumela ku-Instagram nazo zonke lezo ezinye izinto futhi siqhubeka sibuka konke okusizungezile kepha asiziniki isikhathi sokubuka ngempela ukuthi yini Ukuqhubeka ngaphakathi kwethu futhi lokho kungukuzindla kimi ngo-2000 saba nomqeqeshi omusha oyinhloko owafika eLos Angeles Lakers ogama lakhe linguPhil Jackson. UPhil wayesanda kudlula amaBulls ngemiqhudelwano yakhe eyisithupha futhi wayemkhulu impela ekucabangeni nasekuzindleni futhi kwakungeyona inketho kithi, ngakho-ke Sahlala egumbini lethu lama-movie wacisha amalambu futhi wayefuna ukuthi uzindle njengo iqembu futhi wafundisa ukucabanga futhi kwangixhumanisa impela ngoba wafundisa ukucabanga ngokuthile okwakunakekela kakhulu ukuthi umdlalo we-basketball wawuyini ngakho watshelwa nge-lens ukuthi uzokusiza lapha ngakho-ke ngibe nalolu lwazi futhi lokho kwaba isingeniso sami ukuzindla bese ibhalansi esiyitholile neqiniso Esikudlalile ukuthi singaba sendaweni enobutha lapho abalandeli bememeza futhi bememeza futhi wazi izingcindezi futhi kwagcina kungasithinti ngoba besingakaze sibe phezulu kakhulu, singaze sijule kakhulu, ngomzuzwana nje futhi ngazizwa ngiphephe kakhulu nokuthi besingobani futhi lokho kwaba isingeniso sami ekuzindleni ngaba nokuhlangenwe nakho okuhle kakhulu okufunde okuningi ngokuhlangenwe nakho kokuzindla ngangisesikebheni sezindiza futhi ngaya olwandle ngejethi ski an d Ngivele ngangena futhi ngavele ngasuka kuyo ngavumela ukuthwala kwamanje lapho kungangiyisa khona ngakubona ngempela.
Bengizindla kakhulu ngalowo mzuzu ngoba bengingazami ukulawula umzuzu, bengingazami ukuziphoqelela kumagagasi futhi ngitshele lapho bengingomunye walabo uNkulunkulu avumele amagagasi athathe, yebo futhi bekukuningi lokuthula kulo
Badinga ukulala okungakanani abasubathi abaneminyaka engu-17 ubudala?
Imihlahlandlela yethu ithi intshakufaneleuthole phakathi kwamahora ayisishiyagalombili kuya kwayishumi welalanjalo ebusuku. Okomfundiabasubathiikakhulukazi, ucwaningo lubonisa ukuthi kungcono ukuthola okungenani eziyisishiyagalolunye4noma 105amahora. Izingane ezineminyaka yesikole (ezineminyaka engu-6-12iminyaka)isidingookungenani amahora 9-11.05.02.2021
udinga kangakanani ukulala wena noma amalungu omndeni wakho kule ndatshana sizokuhlukanisa ngokweqembu leminyaka ukuze ubone ukuthi uthola ukulala ngokwanele yini ngesiteshi esigxile ekunikezeni imininingwane yezokwelapha ewusizo nenembile yakho neyakho Ukusiza komndeni uma ucabanga ukuthi lokhu kungaba kwakho nginezinkinga zokwelashwa zansuku zonke ongabhekana nazo. Umbuzo esizowuphendula namuhla ngukuthi ngithola okuningi futhi lokho kungukuthi ukulala ngamunye wethu kudinga kangakanani. Ukulala kahle kungenye yezinto ezibaluleke kakhulu ukuhlala uphilile ngokomzimba nangokwengqondo, kodwa ngeshwa kuyinto abaningi bethu, kubandakanya nami, abangayinaki, iningi lethu elihambahamba ebuthongweni bethu linezimo lapho sinezimpawu ezandisiwe Ukulala kungahluka kakhulu ezinganeni Ukucindezeleka, ukukhathala, izingozi zethrafikhi kanye nomsebenzi, kuqala ukuthinta inkumbulo yakho nokukwazi ukugxilisa ingqondo, kanye nokwenza kahle imisebenzi, ukulala kwandisa ubungozi bokukhuluphala ngokweqile nokukhuluphala, futhi kwandisa ubungozi bakho yezimo ezingalapheki njengesifo senhliziyo, umfutho wegazi ophakeme nesifo sikashukela, kanti iqiniso ukuthi, iningi lethu alikutholi ngokwanele.
Udinga Ukulala Kangakanani Ngempela? Siyakwazi ukuthola izindawo ezisiza kakhulu, kuhlale kunokuthile osakudinga ukuzenzela ngokwakho. Manje iNational Sleep Foundation isisungule imibuzo emihlanu ehlukene okufanele uzibuze yona ukubona ukuthi ngabe isixuku Ukulala Okulitholayo Sikwanele Yini Udinga amahora amaningi okulala ukuze ungene egiyeni eliphakeme? Ingabe unezinkinga zempilo njengokukhuluphala ngokweqile? Ingabe ujwayele ukugula? Unenkinga yokulala? Ngabe uncike ku-caffeine ukuze uqede usuku lonke? Ingabe uzizwa ukozela ukushayela imoto uma uphendula ngoyebo kweyodwa noma eziningi zazo? Ukusuka kule mibuzo lapho-ke udinga ukulungisa ukulala kwakho ngokufanele, ngakho-ke ake sithole ukuthi izincomo zokuvumelana zithini nokuthi ngamunye wethu udinga ukulala okungakanani. Ngizoyihlukanisa ngamaqembu ahlukene ngokweminyaka, kusukela komncane kuye komdala, kufanele alale amahora aphakathi kuka-14 no-17, izinsana eziphakathi kwezinyanga ezi-4 nezingu-11, kufanele abe namahora aphakathi kuka-12 no-15, izinsana eziphakathi koyedwa nezimbili kufanele zizale phakathi kuka-11 kanye namahora ayi-14, kanti izingane ezisafunda esikoleni eziphakathi kweminyaka emithathu kuya kwemihlanu kufanele zithole amahora aphakathi kwayishumi nali-13 izingane ezineminyaka yobudala yesikole eziphakathi kuka-6 no-13 kufanele zibe phakathi kwamahora ayi-9 no-11 intsha ephakathi kuka-14 no-17 17 phakathi kwamahora ayi-8 no-10 abantu abadala abasebasha abaphakathi kuka-18 no-25 kufanele babe phakathi kwamahora ayisikhombisa kuya kwayisishiyagalolunye, abantu abadala abaphakathi kuka-26 no-64 kufanele babe phakathi kwamahora ayisikhombisa kuya kwayisishiyagalolunye okufakaza kanti abadala asebekhulile abangaphezu kweminyaka engama-65 kufanele babe phakathi kwamahora ayisikhombisa kuya kwayisishiyagalombili, ngakho-ke uqhathanisa kanjani nalezi zinkambiso? Ngisenomsebenzi okufanele ngiwenze, futhi ngethemba ukuthi ungakhumbula ukwenza ukulala kube yinto ebaluleke kakhulu empilweni yakho.
Ukuze uqale indlela yakho entsha yokulala nokuphila okunempilo, funda lezi zincomo nokuthi ungangena kuphi, zibuze futhi uqaphele imizwa yakho, amandla akho kanye nempilo yakho, ngemuva kokulala kabi ebusuku kuqhathaniswa nokulala okuhle ebusuku, sonke kufanele sibuze ukuthi kanjani kaningi ngilala kahle? Sidinga ukuthi siqaphele impilo yethu yokulala njengoba sikhuluma ngokudla kwethu nendlela esiphila ngayo ngenkathi sivuka, lokhu kuzokwenza umehluko omkhulu empilweni yethu yonke ngakho-ke kunempendulo embuzweni wokuthi sikudinga ukulala okungakanani ngidinga ukukhunjuzwa ukuthi ukuphi ngalesi sihloko esibalulekile kepha ngingajabula ukuzwa kuwe ukuthi ulala kangakanani ebusuku futhi uma ubona sengathi kwanele, sazise kumazwana angezansi futhi usazise cabanga ukuthi Uthole lokhu kuwusizo futhi uma ukwenzile ngicela uthathe isikhathi sakho ukuthanda le ndatshana bese wabelana ngayo nabangani bakho. Kusiza isiteshi sethu ukuthi sikhule futhi sifinyelele abanye abantu abangase basidinge empilweni yabo futhi uma ungakakwenzi lokho, ungashiyi ungabhalisanga bese ushaya lezi zinkinobho zokwazisa ukuze ungaphuthelwa noma ikuphi okuqukethwe kwethu kwesikhathi esizayo, kodwa kuze kube ngokulandelayo isikhathi lokhu njengoba njalo unomndeni onedr
Kungani ukulala kubalulekile kumdlali?
Niniabasubathizijwayeze noma ufunde amakhono amasha,lalaisiza ukwakha izinkumbulo, futhi inikela ekusebenzeni okuthuthukile ngokuzayo. Ngaphandle kwe-lala, izindlela zobuchopho ezikuvumela ukuba ufunde futhi wenze izinkumbulo azikwazi ukwakhiwa noma zigcinwe5.Lalafuthi kubalulekile ekusetshenzisweni kwengqondo.24.06.2021
Ulala isikhathi esingakanani uLebron James?
UJameswaziwa ngokweqile ngandlela-thilelalauhlelo. Ngesikhathi sesizini, kubikwa ukuthiuyalalanjengobaokuninginjengoba 12amahorangosuku. Lokhu akuyona ingozi. Iningi labasubathi abasezingeni lomhlaba libeka phambililala, nabadlali be-NBA bavame ukulala ngezinsuku zomdlalo ukusiza imizimba yabo ukuba iphakame ngokuhlwa, lapho imidlalo yabo iqala khona.
Ukulala okungakanani ngokweqile?
Inani elifanele le-lalakufakazela ukuthi ngoyedwa njengoba abanye abantu bezozizwa bekhulu ngamahora ayisikhombisa kanti abanye bangadinga isikhashana. Kodwa-ke, ezifundweni eziningi nakongoti abaningi, amahora angaphezu kwesishiyagalolunye athathwa njengemali eyeqile noma endelalakubantu abadala.17 2021.
ibhayisikili lomgwaqo we-ironman
Ama-Olimpiki alala kangakanani?
Lokhu kungamangaza kancane, kephaAbasubathi bama-Olimpikingidinga amahora ayisikhombisa kuya kwayisishiyagalolunye ka-lalaubusuku ngabunye cishe inani elilinganayo nomuntu ojwayelekile. Abadlali abanentshisekelo nabaqeqeshi babo bayithathile imiphumela yelalalenyukile eminyakeni embalwa edlule.
Yisiphi isikhathi esihle sokulala nokuvuka?
Abantu kungenzeka babe sebuthongweni babo ezindaweni ezimbili: phakathi kuka-1 emini. nango-3 ntambama. futhi phakathi kuka-2 ekuseni no-4 ekuseni Ngcono ikhwalithi ye-lalauthola, mancane amathuba okuthi uzwe ubuthongo obukhulu bosuku. Isigqi se-Circadian siphinde sichaze isikhathi sakho sokulala nemvelo ekuseniVukaamashejuli.
Uvuka ngasiphi isikhathi uKobe?
Noma ngabeisikhathiI-All-Star Game MVP bekufanele ihambise amadodakazi akhe esikoleni ngosuku lokuzijwayeza, ubengathandaVukakusenesikhathi ngokwanele ukuba sejimini ngo-6 ekuseni, isitimela, uhambe ushiye izingane, bese ubuyela ejimini ngaphambi kokuziqeqesha ngokusemthethweni ngo-10: 30 ekuseni.07.04.2021
Ngabe iLeBron ilala amahora ayi-12 ngosuku?
UJames waziwa ngokweqisa ngandlela thilelalauhlelo. Ngesikhathi sesizini, kubikwa ukuthiuyalalakangango baAmahora angu-12ngobausuku. Lokhu akuyona ingozi. Iningi labasubathi abasezingeni lomhlaba libeka phambililala, nabadlali be-NBA bavame ukulala ngezinsuku zomdlalo ukusiza imizimba yabo ukuba iphakame ngokuhlwa, lapho imidlalo yabo iqala khona.09.10.2020
Ufanele ulale kangakanani njengomdlali?
Ngakho-ke, njengabasubathi, ungenza nje izibalo bese ungeza okungenani amahora ama-2 ubusuku ngabunye ebangeni lakho leminyaka. Uma ungumdlali osemncane (osemusha) onezinga elikhuthele lokuqeqeshwa kwansuku zonke, kepha uthola inani elinconyiwe kuphela lokulala kwentsha ejwayelekile ngakho-ke udinga ukukhulisa amahora akho.
Ingabe kukhona ukuxhumana phakathi kokulala nokusebenza kwezemidlalo?
UCheri Mah waseStanford Sleep Disorders Clinic and Research Laboratory ubelokhu elandela izindlela zokulala nokusebenza kwezemidlalo kwabadlali baseStanford iminyaka. Ucwaningo lwakhe luyaqhubeka nokukhombisa ukuthi ukulala ngokwengeziwe kuholela ekusebenzeni okungcono kwezemidlalo kuzo zonke izinhlobo zabadlali. Isifundo esisodwa asibhalile,
Kubi yini ukuthi umsubathi angalaliswa ubuthongo?
Uma ulala ngokushesha lapho ushaya umcamelo futhi njalo udinga i-alamu ukuze uvuke, kungenzeka ukuthi awunabuthongo. Izindaba ezimnandi kubadlali abaningi bezokungcebeleka ukuthi ubusuku obubodwa bokungaphumuli abuhlobene neze nemiphumela emibi ekusebenzeni. Ngakho-ke, ungakhathazeki uma uphonsa bese uvula ubusuku ngaphambi komncintiswano omkhulu.